Maxa ka soo baxay kulankii Fahad Yasin iyo Saxafiyiinta Xamar? Maxa cusub? - Muqdisho Online. Caasimada Muqdisho
Home Wararka Maxa ka soo baxay kulankii Fahad Yasin iyo Saxafiyiinta Xamar? Maxa cusub?
Maxa ka soo baxay kulankii Fahad Yasin iyo Saxafiyiinta Xamar? Maxa cusub?
Xiligu waxaa uu ahaa habeen, Saacaduna waxay aheyd 08:12pm ilaa 09:48pm Taariikhdu November 05, 2019, goobta kulankuna waxay aheyd Xaruunta NISA ee loo yaqaano Habar-Khadiijo ee Degmadda Shibis.
“Waxaa nalooga yeeray xarunta Hay’adda Nabadsugida iyo Sirdoonka ee Dowladda Federaalka , waxaa nalagu wargeliyey in uu na doonayo Wasiirka Amniga Maxamed Abuukar Islow oo loo yaqaano Ducaale, waxaana goobta ku tagney anaga oo ka kooban milkiiliyaasha warbaahinta xamar qaarkood iyo wariyeyaal caan ah oo ka howlgala warbaahinta gaarka loo leeyahay”. Ayuu yiri mid ka ka qayb-galayaasha shirkaas oo ka gaabsaday in aan magaciisa sheegno.
Waxa uu ku darya “..hase yeeshee waxa na hor yimid Fahad Yaasiin oo ah Agaasimaha Hay’adda Nabadsugida iyo Sirdoonka, waxaana uu nagu yiri sidan: aniga ayaa idin yeerey waxaana rabaa inaan warbixin idinka siiyo shaqsiyadeyda iyo waxa aan qabtey inta aan ahaa agaasimaha NISA”.
Hadalka ka soo yeeray Fahad Yasin ayaa wariyayaashu aad ula yaabeen iyaga oo aan marnaba ka sugaynin in uu isaga shaqsiyan iska hadlo islamarkaana isfaaniyo maadaama shaqada hay’adda NISA ay qabtaan boqalaal shaqaale ka ah hay’adda.
Fahad oo hadalkiisa sii wata ayaa yiri “ waxaa jira in maalintii la ii dhiibey xilka hay’ada ilaa iyo hadda aan aad ula dagaalamey shabaab, waxaan si xoog leh uga hortey qaraxyadda ka dhici jirey xamar oo isugu jirey kuwo ay maleegayeen dad sheegta lahaanshaha “Xamar” iyo kooxo kale oo aan aheynin shabaab, waxa aan dib udhis weyn ku sameeyey xarumaha wardoonka, waxaan kodhiyey dhaqaalaha ku baxa NISA, waxaa sameeyey shaqaale tiro yar oo tayo leh, xogta ka keeni kara meel walba oo aan u diro, waxaa kalsoon amni geliyey Madaxweynaha dalka oo wel-wel badan ka qabay amnigiisa gaarka ah, waxaa kor ka ilaaliyaa nabad geliyada saraakiisha muhiimka ah ee dowladda, xildhabaanada iyo dadka aaminsan dowladda Nabad iyo Nolol”.
Wariyayaasha oo in mudo ah dhagaysanayay faanka iyo hadal intiisa badan been ah ayaa waxa ay bilaabeen in ay su’aalo waydiiyaan isaga. Mid ka mida wariyayaasha ayaa waydiiyay in uu u ogolaado in laga duubo hadalka uu sheegyo si shacabka loola wadaaga hadlakiisa. Fahad ayaa diiday codsigaas.
Su’aal uu weydiiyey mid ka mid ah wariyeyaasha ayaa aheyd sidan “agaasime maadaama aad noo sheegtay wax u eg isxayeesiin soow lama dhihi karo fahad waa faan jecel yahay.
Wuxuu yiri ” waxaan ahay nin dalka isku haayo sidaas dareed faan ma ahan hadii aan kuu sheego wax qabadkeyga ee iigu hiili xirfadaada”.
Su’aal kale oo la weydiiyey ayaa aheyd sidan,”Hadii Farmaajo laga guuleysto xagee xaalkaagu ku dambeyn doonaa” ?.
Waxa uu yiri “aniga ciidna marti gelin kama rabo waan aqaanaa meesha aan ku dambeyn karo, waxaan ahay qof og dantiisa mustaqbalka oo u diyaargaroobay wax kastaa oo igu imaan kara”.
Waxaa la weydiiday, Alshabab waxay lacag ka qaataan Xamar , xataa dekedda iyo airport ka maxaa sababay in NISA ka aamusto oo aysan wax talaabo ah ka qaadin ?
Wuxuu ku jawaabay “ Arintaas waa run , wax weyna lagama qaban karo oo ragaas meel walba ayay ku jiraan, waxaan waxaana ka shaqeeyo dad ka mida dadka ku dhaqan Muqdishu”.
Su’aal kale ayaa aheyd sidan “dadkii saaxiibada la ahaa Farmaajo ee u ololeyn jiray xageebeey ka aadeen?.
Waxa uu yiri “Farmaajo wakhti kooban ayaan aqaanaa inta aan ka war hayana saaxiibo dhab ah ma lahan, hadii uu leeyahayna weyla joogaan saaxiibadiisa”.
Su’aale ayaa aheyd “adiga maxaa lagaa haleeyey oo aad reer Muqdisho ula dagaashay? oo aad jidadka uga xirtey? oo aad u xirxirtay dadka qaar?, oo aad siyaasiyiintooda u dhibaateynaysaa” oo aad dhaqaalahooda u curyaaminaysaa? oo aad u weerartey guriga siyaasi Cabdiraxmaan Cabdishakuur?.
Wuxuu yiri “koleyba aniga Madaxweyne kama ahi dalka, go’aanadda arintaas la xiriirana aniga ma gaari karo kaligeey, su’aashaas dadkale ayaa mudan in la waydiiyo”.
Dhanka kale Fahad ayaa codsadey in si aad ah loogala shaqeeyo dhinaca warbaahinta iyo wax yaabaha la xiriira sumcadiisa, iyo dadka soomaaliyeed loo sheego waxqabadkiisa shaqsiga ah..
Wariye ka socday Muqdisho Online oo halkaas ku sugnaa isaga oo shirka uga qaybglay magac kale ayaa yiri “ Ninkii buurnaa ee aan xalay la soo kulanay, waxa uu u muuqday mid cabsi badan ka muuqatay oo arka in waqtigiisu soo afjarmayo, cabsi badana ka qaba in laga aargoosto”. Waxa uu hadalka ku daray “ .. Fahad waxa uu naga codsaday in aan buun-buunino oo aan shacabka ka iibino, laakiin si kastaa oo loo buunbuuniyo, ninkaas xabsi ama dil ayuu ku danbeyn doonaa, isgana waa ay u muuqataaa”
Previous articleGudiga Doorashada Gudoomiyaha Cusub ee Barl. Puntland oo la magacaabay (Aqriso)
Next articleSheekh Shariif “Khatar weyn ayaa ka soo socota dhismaha ciidamada qalabka sida”